Kuthetha ukuthini ukuphupha igumbi lokufundela okanye igumbi lokuhlala? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Ukuphupha igumbi lokufundela
2 Ngaba ukuphupha useklasini luphawu lokufunda?
3 Igumbi lokufundela elihle
4 Iklasi enomdla
5 Ngeklasi elungileyo
6 Ukunganikeli ngqalelo kwiklasi
7 Igumbi lokufundela kwindawo eyahlukileyo
8 Igumbi lokufundela laseyunivesithi
9 Ukuphupha ngeklasi kulungile?
Ukuphupha igumbi lokufundela
Isidingo sokufunda yinto eyinxalenye yobomi bomntu wonke kwaye ukuphupha kwigumbi lokufundela luphawu lwayo. Eyona nto inomdla kukuba olu hlobo lwamaphupha lukubuyisela esikolweni. Ibonisa ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nesazela sakho, oko kukuthi, malunga nobuntu bakho ngokubanzi.
Ukukhangelwa kwezimvo ezintsha kufuneka kube rhoqo kwaye wonke umntu kufuneka abulele xa eneli thuba. Kule mihla, el mundo inyanzelisa ukuba abantu babe nezimvo ezintsha, ke kubalulekile ukuba bazikhangele. Intsingiselo inokutshintsha kuxhomekeke emntwini kwaye kufaneleke kakhulu ukuthathela ingqalelo zonke iinkcukacha ezenzekileyo.
Ngaba ukuphupha useklasini luphawu lokufunda?
Kubantu abasikelelweyo ngephupha lokufundela kubalulekile ukuba babulele uThixo. Kuya kufuneka ufunde ukujonga ngaphakathi kuwe, okt izimo zakho zengqondo. Kunzima ukufikelela kwelo nqanaba, ke ngumzabalazo oqhubekayo kwaye yonke into ihlala isenzeka.
Izimvo ezintsha kufuneka zibe yinxalenye yobomi bakho, kuba okona kunikwa kuphela kwabo bakufezekisileyo. Kubalulekile ukuba uxabise izinto ezintsha kwaye ngaphezulu kwako konke ufunde ukuba nencasa yamava amatsha. Namhlanje uzokwazi ezona ntsingiselo zixhaphakileyo kwabo baphuphe bekwiklasi yokufunda.
Igumbi lokufundela elihle
Ukufunda isifundo sobomi phantse yonke into iyimfuneko kwaye ukuphupha kwigumbi lokufundela elikhulu kubonisa oko. Kubalulekile ukuba uhambe kubo bonke ubunzima uhlala uncumile ebusweni bakho. Zama ukukholelwa ukuba into engcono izakwenzeka, Oko kukuthi, ukuncama akusokuze kube yindlela yakho.
Kuyimfuneko ukuba sifunde ukuba akusayi kuhlala kusenzeka ukuba yonke into isebenze kwaye kubunzima kukho ithuba lokufunda. Zama ukucinga ngayo kwaye ngaphezu kwayo yonke into ugweme ukungabi nantoni okanye ukucinga ukuba le meko kukuphela kwehlabathi.
Nantsi indlela yokuhamba, Oko kukuthi, ufumene izibonelelo ezininzi ngaphezulu kwayo. Kubalulekile ukuqhubeka kwelo cala linye kwaye ulixabise yonke into eyenzekileyo kuwe. Ukuphupha igumbi lokufundela elinomdla libonisa kakuhle ishishini onokulenza.
Uloyiso luyakwenzeka ebomini bakho, kwaye isizathu kukuzimisela kwakho ukufezekisa le nto uyifunayo. Kubalulekile ukuba ufunde ukuxabisa le kwaye ngaphezu kwako konke ukukholelwa ekubeni yonke into inokwenzeka, kuba injalo. UThixo uyakukhokela kwaye akubukele, ke kubalulekile ukuba uhlale uluxabisa olu nxibelelwano noThixo.
Impumelelo yakho ikufuphi kwaye uya kuyiphumeza ngaphandle kwexesha. Kuyathakazelisa ukuba uqhubeka usenza yonke into obukade uyenza, Oko kukuthi, ukugcina isimo sakho sengqondo ukoyisa yonke into.
Ukuba uphuphe eli phupha, lichaza kakuhle impumelelo yakho yezemali, ke uya kukhula. Mhlawumbi lixesha lokuba unyuselwe emsebenzini kwaye kufuneka wazi ukuba umqeshi wakho ukujongile.
Ukunganikeli ngqalelo kwiklasi
Ukubaluleka kokunikezela kwizinto ezingafanelekanga kuye kwenze umonakalo omkhulu ebomini bakhe. Zama ukuqonda amathuba avelayo kwaye ungakhalazi malunga nento ongekabinayo, kuba yonke into inexesha layo. Kubalulekile ukuba ucinge ngale ndlela ukuze ufezekise zonke iinjongo zakho ngokukhawuleza.
Ukuphupha igumbi lokufundela apho unganikeli ngqalelo khona eklasini luphawu olucacileyo lokuba kuya kufuneka unike ukubaluleka kwinto efanelekileyo. Kuyacetyiswa ukuba uyenze ngoku ukunqanda ezinye iingxaki kwixa elizayo.
Igumbi lokufundela kwindawo eyahlukileyo
Akukho xesha uyakufezekisa zonke iinjongo zakho kwaye isizathu silula: uyakufanelekela. Uzinzo lwezezimali luza kuza ngexeshana elifutshane kuba unendlela yokukhula. Ukuphupha igumbi lokufundela kwindawo eyahlukileyo luphawu olucacileyo lokuba uya kuphumelela ngokukhawuleza.
Igumbi lokufundela laseyunivesithi
Ukufunda kuhlala yeyona ndlela ilungileyo kwaye ukuba uya eyunivesithi kubhetele nangakumbi, yiyo ke le ekucetyiswa kakhulu. Kubalulekile ukuba uqhubeke nokulwela iinjongo zakho, kuba impumelelo iza kuza kungekudala. Kubalulekile ukuba unganikezeli kwaye uqhubeke uzincama ngenxa yento oyifunayo.
Ukuphupha ngeklasi kulungile?
Ukufunda yinto ekufuneka ixatyisiwe ngumntu wonke kwaye ukuba ubenephupha luphawu lokuba uyakudinga. Yonke into ofuna ukuyiphumeza uya kuyiphumeza, kodwa kufuneka ukhuthazwe. Qhubeka ukholwe kubuchule bakho, kuba uphumelele.